ကြာဇံသုပ် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
အစားတစ်ခုရှိပါတယ်..။ကြာဇံနဲ.ပဲသုပ် ..ဒီအစားအစာမျိုးကို ကျောင်းတွေရဲ.
မုန်.ဈေးတန်းမှာအမြဲရနိူင်သလို ..နေ.လည်ခင်းအပျင်းပြေ လမ်းဘေးမုန်.ဆိုင်
ဆား + ဟင်းခတ်မှုန်. ...အနည်းငယ်စီ
ဒန်အိုးတစ်လုံးမှာ ရေထည့်ပြီး နနွင်းမှုန်.(မိမိလိုချင်တဲ့အရောင်အရင့်ပေါ်မူ
တည်) ပြီးထည့်ကာ..ရေဆူလာလျှင် ကြာဇံတွေထည့်ပြုတ်ပါ။
ဟင်းခတ်မှုန်. ၊ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်တို.နှင့်သမအောင်ရောနယ်ပါ။
ကုလားပဲအညို ( ကြက်တူရွေးခေါင်းပဲ)...၁ ဗူး ( နို.ဆီဗူး)
ပဲလုံးတွေကိုရေဆေးပြီး..အနည်းဆုံး (၆) နာရီခန်.ကြိုတင်ရေစိမ်ထားပါ။
အရောကို..နနွင်းမှုန်. ၊ အရောင်တင်မှုန်.(ငရုတ်စပ်မှုန်.) တို.နှင့်အတူဆီသတ်ပါ။
တွဲဖက်စားသုံးရန် ကြက်သွန်နီနုပ်နုပ်စဉ်း၊ ပူဒီနာ (သို.) နံနံပင် ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း
ငရုတ်ကျက်မှုန်.တို.ကို ရောပြီး..မန်ကျည်းရည် ၊သကြားရည်(သို.) ထန်းလျက်ရည်၊ ဆား တို.နှင့်ချဉ်ငံစပ်အရည်ကျဲကျဲပုံစံဖျော်ထားပါ။
ကြာဇံသုပ်လက်တစ်ဆုပ်စာပေါ်ပဲသုပ်( ၂) ဇွန်း( ဟင်းခတ်ဇွန်း) ထည့်ပြီးအချဉ်ရည်ကို..မိမိနှစ်သက်သလိုလောင်းထည့်စားသုံးနိူင်ပါသည်။
photo credit ..MOGOK RUBYL@ND.